Beelo ku dagaalamay Deegaano ka tirsan Galgaduud oo heshiis gaaray. -News and information about Somalia
Home Warkii Beelo ku dagaalamay Deegaano ka tirsan Galgaduud oo heshiis gaaray.
Beelo ku dagaalamay Deegaano ka tirsan Galgaduud oo heshiis gaaray.
Wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ayaa sheegaya in heshiis rasmi ah laga gaaray xiisad colaadeed oo u dhaxeysay laba maleeshiyo beelood.
Beelaha heshiiska gaaray ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay dilal la xiriira aanooyin qabiil waxaa ay isugu geysteen Deeganada Bangeele Iyo Xinjilab, iyadoona shalay arintaasi lagu guuleystay.
Goobta ay heshiiska ka dhacaysay ku sugnaa Waxgaradka labada Beelood iyo Taliyaha Ciidanka qeybta 21aad Cabdul Casiis Cabdulaahi Gooje iyo Taliyaha Ciidanka DANAB ee qeybta 21aad Muqtaar Cabdulle Xuseen,kuwaas oo qeyb ka ahaa heshiiska maleeshiyaadka dagaalamay.
Casiis Cabdulaahi Gooje Taliyaha Ciidanka qeybta 21aad Cabdul ayaa ugu baaqay waxgaradka iyo maleeshiyaadka dagaalamay inay fuliyaan qodobada heshiiska si ay nabad ugu wada noolaadaan shacabka ku nool deegaanada lagu dagaalamay.
Next articleGolaha aqalka sare oo maanta kulan ku leh Muqdisho
Saadaq John Oo Halis Amni Ka Jirta Xarunta Gobolka La Wadaagay...
SAWIRO: Dowladda Oo Muddo Kadib Dib U Bilaawday Dhoofinta Mooska Somalia